Showing 161-180 of 361 items.
एसिडपीडित मुस्कानलाई अमिताभ बच्चनले पठाए भिडियो सन्देश
काठमाण्डौ / केही हप्ताअघि वीरगञ्जमा १५ वर्षीया बालिका मुस्कान खातुनलाई स्थानीय दुई किशोरले एसिड प्रहार गरेका थिए। अहिले उनको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ। यही सन्दर्भमा बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले भिडियो सन्देश पठा
प्रकाशित मितिः आश्विन १६, २०७६
जान्नुहोस् दम्पतीबीचको उमेर कति वर्षले अन्तर हुनुपर्छ ?
इटहरी / नेपाली समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ। सायद पितृसतात्मक सोंचचिन्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ। युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अ�
प्रकाशित मितिः आश्विन १३, २०७६
महिलालाई झुक्किएर पनि प्रयोग नगर्नुहोस् यी शब्द
इटहरी / हिन्दुधर्म शास्त्रमा आफ्नो घरको महिलालाई लक्ष्मीको दर्जा दिइएको छ भने जुन घरमा महिला खुसी छिन् त्यो घर स्वर्ग सरह हुन्छ भनिएको छ। घरलाई उज्यालो र पवित्र बनाउनको लागी सबैभन्दा पहिले महिलालाई खुसी बनाउँनुपर्दछ। महिलाला
कम उमेरमा विवाह, जीवनभर पछुतो
मोरङ / &lsquo;बीसपारि अनि मात्र बिहेवारी&rsquo; अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न सकेमात्र हाम्रो समाज असल समाज बन्न सक्छ भन्ने यथार्थतालाई यहाँका महिलाले अब बुझ्न थालेका छन्। अपरिपक्व उमेरमा गरिने विवाहले भविष्य उज्वल हुनुका साटो अन्धकार भए�
प्रकाशित मितिः आश्विन १२, २०७६
आवाजभन्दा छिटो उड्ने विमान
एजेन्सी / लण्डनमा आवाजभन्दा द्रूत गतिको &lsquo;रकेट इन्जिन&rsquo;ले उडान भर्न थालेको छ। विमानले उडान भर्न थालेपछि सन् २०३० को दशकमा लण्डनदेखि सिड्नीको हवाई यात्रा ८० प्रतिशतले कम हुनेछ। युके अन्तरिक्ष सम्मेलन २०१९ मा युकेको अन्तरिक्�
प्रकाशित मितिः आश्विन ११, २०७६
विश्वका सबैभन्दा वृद्ध हजामको १०८ वर्षको उमेरमा निधन
एजेन्सी / संसारको सबैभन्दा वृद्ध हजाम एन्थोनी म्यानकिनेलीको १०८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। न्युयोर्क निवासी एन्थोनीको सेप्टेम्बर १९ मा मृत्यु भएको थियो।&nbsp; उनी ९६ वर्षसम्म कपाल काट्ने पेसामा सम्लग्न भए। एन्थोनीको परिवार सदस�
फेसबुकका पोष्टमा हुने ‘लाइक’ अब नदेखिने, अष्ट्रेलियामा परीक्षण सुरु
एजेन्सी / फेसबुकमा कुनै फोटो वा भिडियो पोस्ट गरेपछि हामीलाई त्यसमा आउने लाइकको आसा हुने गर्छ। सुरुदेखि नै लाइक बटन फेसबुकको पहिचानगत विशेषता रहँदै आएको थियो। अब आएर फेसबुकले यो फिचरलाई बन्द गर्न लागेको छ। यो परिवर्तनपछि तपाईक
सिरानीमा मोबाइल राखेर सुत्ने बानी छ ? सावधान निम्त्याउला यस्ता समस्या
काठमाण्डौ / आज प्रविधिको युग। सबैको हात हातमा मोबाइल छ। हात हातमा मोबाइल नहुने मान्छे त बिरलै पाइछ आजकाल। मोबाइल फोन मानिसको जीवनको महत्वपूर्ण साथी नै बनिसकेको छ। हिजोआज मानिसको सबैभन्दा नजिक साथी नै मोबाइल बनेको छ। पूजाआजा ह�
तौल घटाउने हो ? बिहान उठ्ने बित्तिकै यसो गर्नुहोस्
एजेन्सी / ओजन बढी भएकाहरुले बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा एक&ndash;डेढ गिलास पानी पिउनु एकदमै उत्तम मानिन्छ। यसो गर्नाले ओजन घटाउन मद्दत गर्नुका साथै दिमागमा प्रर्याप्त उर्जा दिन्छ। जसका कारण दिनभर सक्रीय हुन सहयोग मिल्छ। चिय�
एजेन्सी / दिनानुदिन मानिसहरुमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको क्रेज यस्तो छ कि मानिसहरु आफ्नो धेरैजस्तो समय विभिन्न किसिमका पोस्ट शेयर गर्नमा नै व्यस्त रहन्छन्। मानिसहरु सामाजिक सञ्जालको प्रयोग �
प्रकाशित मितिः आश्विन ६, २०७६
एजेन्सी / दुई व्यक्तिबीचको आपसी सहमतिमा नै विवाह हुन्छ। समाजमा विहेलाई पवित्र बन्धनको रुपमा लिइन्छ र जीवनमा विहे एकपटक मात्र गरिन्छ। पछिल्लो समय समाजमा व्याप्त विभिन्न बानी र संस्कारले वैवाहिक जीवनमा समस्या बढ्दै गएको छ। श्र
एजेन्सी / दिनभरीको व्यस्तता पछि पनि रातमा निद्र्रा नपरेको दुखेसो सुन्ने गरिन्छ। शारीरिक तथा मानसिक दुवै कारणले रातमा निद्रा नपर्ने समस्या हुनसक्छ। तर, यसका साथै बास्तु शास्त्रले पनि रातमा निन्द्रा नपर्नुको कारण उल्लेख गरेको
एनसेल पीआरबीटी सेवा : अब आफ्नै धुन बनाएर बोनस ब्यालेन्स र पुरस्कार जित्न सकिने
काठमाण्डौ / एनसेलका ग्राहकहरुले अब आफ्नै धुन रेकर्ड गरी आफ्नो प्ले ब्याक रिङ्ग टोन (पीआरबीटी) को रुपमा राख्न र अरुलाई सो धुन प्रयोग गर्न आह्वान गर्न सक्नेछन्। साथै धुन बनाउने ग्राहकले आफ्नो धुनलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत
एजेन्सी / सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले दशौँ हजार एप्सलाई निलम्बन गरिदिएको छ। सन् २०१८ मार्चको केम्ब्रिजको विश्लेषणात्मक तथ्याङ्कका कारण फेसबुकले अध्ययनका लागि ती एप्सलाई निलम्बन गरेको कम्पनीले शुक्रबार जनाएको छ। निलम्बनमा परे�
प्रकाशित मितिः आश्विन ४, २०७६
कहिल्यै पनि छुट्दैनन् यी राशि हुने प्रेमी प्रेमिका
काठमाण्डौ / अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन्,जुन राशि भएका प्रेमी प्रेमिका कहिलेपनी छुट्दैनन्। उनीहरूको सम्बन्छ एकदमै बलियो हुन्छ। शास्त्रका अनुसार नै १२ राशि रहेका हुन्छन्। ती राशि अनुसार मानिसको स्वभाव आचरण फरक रहेको हुन�
फेसबुकले आफ्नै ‘सर्वोच्च अदालत’ बनाउँदै
काठमाण्डौ / पछिल्लो केही वर्षयता सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चर्चा र विवादको केन्द्र बन्दै आएको छ। गोपनीयतासम्बन्धी सवाल, सुरक्षासम्बन्धी सवाल तथा सरकारहरूसँगको विवाद जस्ता विषयहरुबाट फेसबुक घेरिँदै आएको छ। यावत् विवादहरुबाट पा
प्रकाशित मितिः आश्विन ३, २०७६
यस्तो छ हराएको मोबाइल खोज्ने सजिलो तरिका, प्रहरीकहाँ धाउनु पर्दैन्
इटहरी / अहिले महंगा मोवाइल प्रयोग गर्ने एक प्रकारको फेसन नै बनेको छ। साथै मानिसहरुले मोवाइलाई बहुउपयोगी साधानका रुपमा पनि प्रयोग गर्छन्। मोवाइलमा फोन नम्बर मात्रै हैन, जिन्दगीका कतिपय अविस्मरणीय पल पनि राखिएका हुन्छन्। जब मो�
प्रकाशित मितिः आश्विन २, २०७६
छविसँगै बस्न थालिन् शिल्पा !
काठमाण्डौ / शिल्पा र छविको झगडाले केहीसमय नेपाली चलचित्र क्षेत्र अस्तव्यस्त नै बन्यो। जताततै उनीहरुको घरझगडा र डिभोर्सकोे कुरा आउन थालेका थिए। यो कुरा बाहिर आएपछि छवि र शिल्पा दुवैलाई घाटा भने भएको छ। उनीहरुलाई राम्रो भन्ने द
अब फेसबुकमा लाइक गर्न नपाइने !
काठमाण्डौ / व्यापक आलोचनाका बाबजुद फेसबुक अहिले पनि विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल हो। दैनिक करोडौँको संख्यामा भिडियो, फोटो तथा अन्य सामाग्रीहरु फेसबुकमा शेयर गरिन्छन्। फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि यसमा भएक�
बिहीबार किन भगवान विष्णुको पूजा गरिन्छ ?
इटहरी / बिहीबार देवताका गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको लागि विशेष मानिन्छ। यो दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुने जन विश्वास रहेको छ। यो दिन पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको दान गरेमा शुभ मिल्न�